လက်ကားအမြန်ဖွင့်အလိုအလျှောက် Filter Press ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ HZFILTER
လျင်မြန်စွာဖွင့်လှစ်သောအလိုအလျောက်စီစစ်သည့်ဖိအားသည်လျင်မြန်စွာစစ်ထုတ်ခြင်းသံသရာအတွက်လိုအပ်သည်။ ကိတ်မုန့်ကိုလွှတ်ပေးသည့်တိုးတက်မှုအတွင်းပန်းကန်များကိုသုံးပြားငါးပြားကိုအတူတကွဖွင့်နိုင်သည်။ ဒါဟာကိတ်မုန့်ဥတုအချိန်အလွန်တိုတောင်းသည်။
မြန်သောအဖွင့် filter filter သည်သတ္တုရိုင်းများနှင့်အခြားမြန်သော filtering demand စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
နာမည်: အဖွင့်အပိတ်အဖွင့် filter ကို
အားသာချက် - လျင်မြန်စွာဖွင့်လှစ်ပြား
လျှောက်လွှာ အာရုံစူးစိုက်မှု filtering ကို, အမြီး
HZFILTER လျင်မြန်စွာဖွင့်လှစ်အလိုအလျောက် Filter Press
အလိုအလျောက်နှိပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လာခြင်း၊ အလိုအလျောက်ဖိအားထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပန်းကန်ဖွင့်လှစ်ခြင်း။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖိအားမြင့်စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကိတ်မုန့်အစိုဓာတ်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးဖိအားအမြှေးပါး filter ပြားများနှင့်လေမှုတ်စက်များနှင့်အခြောက်ခံဆုံး filtered ကိတ်မုန့်များတပ်ဆင်ထားသည်။
အလျင်အမြန်ဖွင့်သည့်စစ်ထုတ်စက်များကိုတွင်းထွက်များ (သို့) အခြားအစာရှောင်ခြင်းစစ်ထုတ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
အစာရှောင်ခြင်း filtering ကိုအောင်မြင်ရန်ဆင်ခြင်တုံတရားဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူနှစ်ဖက်နှစ်ဖက်
ကွဲပြားခြားနားသော slurry အပေါ်အခြေခံပြီး 8-15 မိနစ် / သံသရာ။
ထိရောက်သောဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ အများဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်း 240L / min၊ အစာရှောင်ခြင်းချုံ့ခြင်း, ပြန်လာ, လည်ပတ်မှုအချိန်ကိုလျှော့ချ။
ထိရောက်သောအလိုအလျောက်ပြားဆွဲစနစ်၊ လွတ်လပ်သောအသိဥာဏ်မူပိုင်ခွင့်နှင့်စက်မှုဒီဇိုင်းနှင့် servo motor control တို့သည်ပန်းကန်ဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုတိကျစေသည်။
အမြင့်ဆုံးထိရောက်သောအလိုအလျောက် dip tray အရည်လက်ခံသောစနစ်သည်သီးခြားအလိုက်ခတ်၏အဖွင့်အပိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်သီးခြားဟိုက်ဒရောလစ် drive ကိုအသုံးပြုသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များ၊ ကိုက်ညီသော ဦး ခေါင်းပိုက်လိုင်းအဆို့ရှင်များနှင့်တူရိယာများ၊ ဘက်ပေါင်းစုံဖြန့်ဝေခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တည်ဆောက်မှုကာလနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။
Filter :ရိယာ: 100 ~ 1000m2.
ပြားအရွယ်အစား - ၁၀၀၀၊ ၁၂၅၀၊ ၁၅၀၀ နှင့် ၂၀၀၀ မီလီမီတာစတုရန်းအရွယ်အစားဖြင့်ရနိုင်သည်။
ပြားဖွဲ့စည်းပုံ - နဂိုအတိုင်း / အခန်းအမျိုးအစား၊ အမြှေးပါးအမျိုးအစား၊ ရရှိနိုင်သောပန်းကန်နှင့်ဘောင်အမျိုးအစား။
ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအသံအတိုးအကျယ်: 1.5 ~ 20 မီတာ3.
ကိတ်မုန့်အထူ: 30 ~ 50mm ။
အစာကျွေးဖိအား: 10 ~ 25 ဘား။
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -10 ~ 120 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။
Slurry PH: 1-14 ။
ရှေ့သို့ Chamber Filter စာနယ်ဇင်း
နောက်တစ်ခု: အဖွင့်အပိတ်ဖွင့်သည့် filter ကိုတုန်ခါမှုစက်နှင့်အတူ
Filter ကိုနှိပ်ပါ။ Automatic Plate Shifter